Homeसमाचारशनिको साढे सात ग्रह दशा हटाउन के गर्ने ?
October 3, 2020 admin समाचार 10457
शनि’को साढे सातको दशा कसै’मा एक पटक देखा परेमा यसले निकै ठुलो क्षति पुर्‍’याउने ज्योति’षशास्त्रीहरु बताउँछन् । बिरलै’लाई मात्र यसले लाभ गर्छ ।
त्यसैले शनि’को साढे सात दशाको दाेष निवारण गर्न विभिन्न शा’स्त्रीय विधि अपनाउनुपर्छ । यदि तपाईमा पनि साढे सात’को दशा चलेको छ भने त्यसको दोष देखिने ज्यो’तिष शास्त्री’हरु बताउँछन् ।
यदि साढे सा’तको दशा चलेको छ भने त’पाईको जीवन निकै कष्टकर बन्छ । तपाईले चाहेका कुनै पनि काम फत्ते गर्न सक्नुहुन्न । घरमा पनि अनिष्ठ हुन्छ । यस्तो दशाको दोष नि’वारणका लागि शनिबार पारेर फला’मका सामाग्री श’निदेवको मन्दिरमा चढाउनुपर्छ ।
यसबाट शनि’को दशा’बाट मुक्ति मिल्छ । यस बाहेक राशि अनुसारका निम्न उपाय गरेमा पनि शनिको साढे सा’तको दशा’बाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
मेष राशि’मा शनिको साढे सातको स’मस्या देखा परेमा अरुको भरमा पर्ने काम’मा पनि आफै अग्रसर हुन आव’श्यक छ । यस बेलामा कामको तनाव र चिन्ता बढि हुने भएकाले कुनै पनि निर्णय लिन हतार गर्नु हुँदैन । कुनै कारो’बार वा महंगो वस्तु लिनु’पूर्व निकै सोचविचार गर्नुपर्दछ ।
वृष राशिको व्यय’वृद्धिको नियन्त्रण अरुमा निर्भर हुन्छ । तसर्थ कुनै कुरा’को थालनी पूर्व आफन्त वा वि’श्वासी नाताका मानि’ससंग सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ । जोखिम’युक्त कामको थालनी गर्दा भावनामा रहेर गर्नु हुँदैन अन्यथा यसको नका’रात्मक असर देखापर्न सक्छ ।
मिथुन रा’शिका व्यक्तिमा साढे सा’तको समस्या भए तन्त्र’मन्त्रमा रुचि बढ्ने गर्दछ । धार्मिक स्थल वा तिर्थको योग हुनसक्छ । त्यसैले धर्म प्रति नका’रात्मक हुँनुहुँदैन । आर्थिक विषयमा वि’चार विमर्श गर्नु लाभकारी हुन्छ । सेवा वा दान’को काम गरेर पनि शनिको साढे सातबाट मुक्ति पाइन्छ ।
कर्क’ट राशिका व्यक्तिमा शनि’को प्रभाव भएमा धर्मस्थलको यात्रा दर्शनको सुयोग बन्दछ । यसरी यात्रा जुरेमा त्यसलाई निन्दा गर्नु हुँदैन । साथै प्रभावशा’ली व्यक्तिको सह’योगमा मार्ग’दर्शन लिएमा मात्र शनिको प्रभाव कम हुने र धन प्राप्तिको योग बन्ने हुन्छ ।
सिंह राशिका व्य’क्तिमा शनिको प्रभावले स्वास्थ्य’मा समस्या देखापर्न सक्छ । काम गर्दा बिग्रने हुनसक्छ । तर यस्तो बेलमा सुझबुझका साथ हतार र लाप’रबाही नगरी निर्णय लिनु पर्दछ । कुनै पनि वा’हनको प्रयोग गर्दा साव’धानी अपनाउनुपर्छ ।
कन्या राशिका व्य’क्तिमा शनिको व्यक्ति सा’तको प्रभाव भएमा यसले कतिपय अवस्था’मा लाभ गराउन सक्छ । ठूला समस्या’को समाधान समेत हुनसक्छ । विवा’हका लागि प्रस्ताव आउन सक्छ । तर कन्या राशिको चञ्च’लताका कारणले राम्रो योग गुमेर पनि समस्या ब’ल्झिन सक्छ ।
तुला राशिका व्यक्ति’मा शनिको प्र’भाव देखा परेमा यसले बनेका काम बिर्गा’ने तथा प्राप्त धन समेत हातबाट फुत्कने हुनसक्छ । कुनै काम गर्दा अनायासै बाधा हुने र अवसर गुम्न सक्छ । तर कतिपय अवस्थामा मित्र र नाताका व्यक्ति’को साथले धनवृद्धि र अव’सर प्राप्ती समेत हुनसक्छ ।
वृश्चिक राशिका व्यक्तिमा शनिको व्यक्ति सातको प्रभाव देखा परेमा मांगलि’क कार्यको आयो’जन हुनसक्छ । मानसिकतामा रचनात्मक तथा बौद्धिक कार्य गर्ने विचार आए पनि यसमा अप’जस तथा अवरोध खेप्नुपर्छ । तर विस्तारै यो स’मस्या आफै हटेर जानेछ ।
धनु राशि’लाई शनिको व्यक्ति सातको प्र’भावले खराब समाचार सुनाउन सक्छ । मेहनत अनुसारको फल पाउन सकिदैन । अरुले शंका गर्ने गर्दछन् । नसोचेको स्थानबाट पनि विवाद झेल्नु पर्ने हुनसक्छ । धनहानि हुन्छ । तर नियमित शनि’देवको आर’धना गरे तुरुन्तै मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
व्यक्ति सात’को प्रभावमा मकर राशिका व्य’क्तिलाई केहि फाइदा हुनसक्छ । नाताका व्य’क्तिबाट राम्रो सह’योग पाउन सकिन्छ । तर कुनै पनि ठुलो निर्णय लिनु पूर्व जोखि’म अनुसार जान’कार व्यक्तिबाट सहयोग वा सुझाव लिनु पर्दछ । अन्यथा राम्रो अवसर पनि गुमेर जा’नसक्छ ।
कुम्भ राशि’का व्यक्तिमा शनिको सा’तको प्रभावले राम्रा व्यक्तिसँग भेट र सम्बन्ध बनाउने योग हुन्छ । यसले राम्रो आम्दानी हुने तथा मनोरञ्ज’नात्मक काममा साथ दिएमा पनि सफ’लता पाउने बेलामा भने खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय बनाउने गर्दछ । तसर्थ शनिलाई प्रसन्न गराउनु आव’श्यक हुन्छ ।
मीन राशि’का व्यक्तिमा शनिको सातको प्रभावले अप्रत्या’शित लाभको अवसर जुराउँछ । तर लगातारको का’मबाट हुने आर्थिक उन्नतिमा भने बाधा हुनसक्छ । भाग्य अनुकू’लता नभएमा जस्तो मेहनत गरेमा पनि बनेको काम गुम्न सक्छ । तर मेहन’त छाड्नु भने हुँदैन, पछि यसले लाभ दिन्छ । -खबर हब बाट
December 28, 2021 admin समाचार 1420
March 25, 2021 admin समाचार 4157
September 12, 2020 admin समाचार 13094
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227912)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220856)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220708)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217729)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216787)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215431)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (214186)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (214075)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182548)